Beddel Wakiilka Isticmaalaha Chrome adoo adeegsanaya bedelka wakiilka isticmaalaha | Laga soo bilaabo Linux
Waa hagaag qoraallada ku saabsan beddelaadda Wakiilka Isticmaalaha ee Chrome waa badan yihiin, laakiin qoraalkeyga gaar ahaan waxaan rabaa inaan la wadaago talooyin ku saabsan arrintan si aan u beddelo wakiilka isticmaalaha.
Sidaad ogtahay waxaan u adeegsanaa wakiilka isticmaalaha markaan wax ka faallayno Laga soo bilaabo Linux ka dhig Nidaamka Howlgalka, Degaanka iyo Nooc Browser Faallooyinka, dhibaatada ka jirta kiiskeyga, iyo tan isticmaaleyaal kale oo badan, ayaa ah in marka wax laga beddelayo wakiilka isticmaalaha, bogagga qaarkood ay leeyihiin cillado ama si fudud ha ku shuban / ha u shaqeynin sidii la rabay, si loo xalliyo tan, kordhintaan, marka lagu daro noo oggolaanshaha beddel wakiilka isticmaalaha, wuxuu u oggolaanayaa inuu dego in bogagga aan dooneyno inaan u adeegsanno wakiil isticmaale kale.
Fiidiyowga soo socda ee fiidiyoowga ah ee aan ku tusi doono waa sida loo qaabeeyo Wakiilka isticmaalaha furaha si markaan u helno Laga soo bilaabo Linux si toos ah aan ku dhex mari wakiilka isticmaalaha wax laga badalay Oo markaa markaan faallo ka bixinno, waxay u muuqataa nidaamka aan ka faalloonno, dabiici ahaan markaan tagno tab kale ama si fudud u beddelno bogga, si otomaatig ah el Wakiilka isticmaalaha waxaa loo isticmaali doonaa Default, iyadoo laga fogaanayo in boggu soo bandhigo nooc ka mid ah khilaafyada, iyada oo aan wax badan laga sheegin, halkan waa fiidiyowga-fiidiyowga (si aad si fiican u aragto, ugu ciyaaro 1080p ama 720p xD):
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Beddel Wakiilka Isticmaalaha Chrome adoo adeegsanaya bedelka wakiilka isticmaalaha
Waxaan bilaabay inaan arko si aan u maqlo codka Mudane Tete .. = D
«Yyyyyy .. ..waxaan ku raaxeysan doonnaa nolosha elav .." xDD
PS: waxaad maqleysaa sida qaboojiyaha u buuxo .. ee
Tuto fiican .. ..in kastoo aan isticmaaleyn Chrome ..
hahaha arag, markay diirtu shaqo qabsadaan, waalataa hahaha
Waxaan u adeegsadaa Iceweasel halkii aan ka isticmaali lahaa Chromium sababta oo ah sababo aan la garanayn darteed ayaa Chromium iyo Chrome waxay ii keeneen xoogaa fiidiyoowyo ah Flash iyo HTML5 oo leh nal dhalaalaya.
Taasi waa dhibaatada Debian Chromium
Wax la mid ah ayaa igu dhacaya aniga oo ah Chrome Google Chrome iyo Ubuntu Chromium oo lagu rakibay Debian.
Marka waa dhibaatada Debian.
Tani ... maxaa igu dhacay aniga?
wax la mid ah ayaan u baahday in aan faallo ka bixiyo si aan u muujiyo waxa dhacaya waxaan u tegey faallo si aan u bogo mid ka mid ah qoraalkaaga xD hahaha
Tuto wanaagsan. maxaa intaas ka sii badan, waad badbaadisay naftayda adoo adeegsanaya kordhintaas.
Eeg haddii aan ku rakibo Chromium-ka Windows.
Kaliya wixii aan u baahday 🙂 Waad ku mahadsan tahay Tete.
Waxay umuuqataa in hadaad kaligaa sameyso ... laakiin kaliya bogga ugu weyn 😛 Qoraal kuma socdo ...
Haa, hadda way socotaa. Waxay ahayd inaan ku daro liiska sida fiidiyowga, oo aan ahayn buug :)
Fiidiyowga, u fiirso inaan mar kale faallo ka bixinayo qoraalka 'elav post' waana uu shaqeeyaa (oo waxaan ka calaamadeeyaa bogga ugu weyn ee wakiilka isticmaalaha switcher), runtiina hadda waxaan u isticmaalayaa xD
Aan aragno haddii aan ku helo wakiilkeyga isticmaale Chromium-kayga.
Haa way soo baxday. Aad baad ugu mahadsantahay caarada. Isla markiiba, waxaan ku tijaabiyaa Windows.
Waa codsi aad u fiican waxaana loo heli karaa firefox iyo wax soo saar, laakiin waqtigan xaadirka ah waxaan isticmaalayaa Secret Agent (oo loo heli karo Firefox iyo SeaMonkey).
websaydhka mashruuca: https://www.dephormation.org.uk/?page=81
Waana kan mid ka mid ah liistada liiska wakiilka isticmaalaha.
Waxay ku nuqulaan tifaftiraha ay jecel yihiin oo ay u keydisaan sida mylista.xml, ka dibna waxay aadaan Wakiilka Wakiilka Beddelaha> Dejinta> Dejinta Qalabka iyo soo dejinta mylista.xml.
Liiska waxaa laga heli karaa Wakiilka Isticmaalaha Wakiilka> Jaangooyaha
Firefox-ka way fududahay in lagu daro xariga guud.useragent.override en ku saabsan: config
Sida iska cad way fududahay in lagu daro general.useragent.override, laakiin waxay ku egtahay in isla isticmaale loo adeegsado dhamaan boggaga waxaana jira waqtiyo ay boggaga adeegsadaan cinwaanada iyadoo kuxiran biraawsarka waxayna noqon kartaa inaad ubadasho isticmaaleha si aad si sax ah u muujiso goobta . Marka la soo koobo, waa arrin la taaban karo. Sidoo kale waxaad dhahdo waa hagaagsan yihiin.
Aan aragno haddii ay shaqeyneyso
eeg haddii ay shaqeyso, mahadsanid boostada wanaagsan
Wakiilka isticmaale ee OpenSUSE Chromium horeyba waa loo bedelay ... kaliya wuxuu leeyahay Chrome halkii laga dhigi lahaa Chromium laakiin wax waa wax
Waxaan u maleynayaa inaan xasuusto inay ku qoran tahay SUSE, in ddg.gg raadinta adeegsi deg deg ah way muujineysaa
Haa, waxay leedahay SUSE laakiin boggan wali waxay umuuqataa mid furanSUSE.
Sidee la yaab leh in aysan sidan oo kale ugu samayn #firefox taas oo ah xS-da caadiga ah
Waxay iga joojisaa inaan galo degellada internetka qaarkood, markii aan wax ka beddelo wakiilka isticmaalaha 'XD user'.
Taasi aniga igama dhacdo Firefox markaan iska dhigo Iceweasel.
Si aad u aragto sida ay u egtahay
Isbeddelkan - waxay shaqeysay markii ugu horreysay - mucjiso haddaanan ahayn cawaan
ee 3 bedelka wakiilka ee Chrome ay bixiso waa midka maaskaro leh
Haddaanan sidaa u caajisi lahayn, waxaan fulin lahaa casharka: - /
Tijaabinta Wakiilka Isticmaalaha Qalabka leh 'Chromium Nightly' ee Windows 7.
Waad ku mahadsan tahay Tuto
Iyo qalab la mid ah firefox?
Waxaan kuugu jawaabayaa, halkan waxaan ka helay nooc loogu talagalay Firefox, waxaan u maleynayaa inay isku mid tahay https://addons.mozilla.org/es/firefox/addon/user-agent-switcher/
Waad salaaman tahay, waxaan arkaa in kordhintaan ku jirta Firefox aysan u oggolaaneynin inay si otomaatig ah u bedesho adeegsiga loogu talagalay bogagga internetka qaarkood, qofna ma garanayaa mid sameeya?
Tan ayaan kula jeclahay, mana sameyn karo "magaca qeybinta" inay u muuqato Hahaha, waxay umuuqataa mid qosol badan 😀
Jawaab Javier Orozco
Waxaan qabaa hadda…
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay 😀
tijaabinta haddii ay la shaqeyneyso Funtoo: v
Aan aragno hadda waxaan u maleynayaa inaan uga tagayo sidii Gentoo xD
okay ,, laakiin waan jeclahay qalinka ,,,,, laakiin sikastaba qof walbo wuxuu geyn karo wuxuu rabo ,,, LFS ayaa lagu daray
Shaqeeyaa! Mahadsanid 😀
Hadda waxaa soo baxday inaan doonayo inaan ku sameeyo Chromium, halkanna waxay ku ogaaneysaa inay tahay Chrome: C
Waan badalay, aan aragno ...
Xq ma helayo nooca chrome
tijaabin si loo arko haddii ay shaqeyso iyo in kale.
ku soo tijaabi Linux
tijaabo kale oo ka socota Linux
Tijaabi awooda n